Barreessitoonni Afrikaa 100 ol ta'an Pireezidant Isaayyaasiif xalayaa barreessan - BBC News Afaan Oromoo
Barreessitoonni Afrikaa 100 ol ta'an Pireezidant Isaayyaasiif xalayaa barreessan
Barreessitoonni Afrikaa bebbeekamoo yeroo garaa garaatti badhaafaman, hayyoonniifi rogeeyyiin 100 ol ta'an Preezedaantiin Eertiraa Isaayyaas Afa-warqiif xalayaa banaa barreeessan.
Gareen miseensota 100 ol of keessaa qabu kun Pirezedaanti Isaayyaas, biyya isaanii akka 'bakka isheef malutti makuun maatii biyyoota Afirkaa akka taasisaniif gaafatan.
Gareen kun barreessaa beekamaa lammii Naajeeriyaa Wolee Soyinkaaafi barreessituu bekamtuu dhalattuu Itoophiyaa Ma'aazaa Mangsitee akkasumas duuula farra malaammaltummaa Keeniyaa keessa jiru dura dhaabbachuun kan beekamu Joon Gitoongoo of keessaa qaba.
Simannaa Pirezidantii Ertiraa suuraan
Lammaa Guyyaa pirezidaantii Ertiraa badhaasan
Barreessitoonni kunneen Ertiraanota cinaa dhaabbachuuf akka barreessan himanii, "Ertiraan sadarkaa ardii keenyaatti hundaan ol hawwaasa addunyaarraa adda bahe" jedhan.
Ergaa isaanii akkas jechuun barreessan: "Nuti gidiraan Afirikaanotaa hundi walqixa nu gaddisiisa. Kun ammo lammilee Ertiraa warra jireenya isaanii mo'achuuf, akkasumas maatii isaanii gargaaruuf biyya isaanii gadi dhiisan baqatan baayyee nu gaddisiisa."
Barreessitoonni xalayaa kanaa jila tokko gara magaalaa guddoo Ertiraa Asmaraatti erguu barbaadu. Jilli ergamu kunis prezedaant Isaayyaasiifi lammilee, akkasumas gaazexeessitoota, barreessitootaafi namoota yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiran waliin haasa'uudha."
Image copyright THOMAS SAMSON
"Nuti Afrikaanotaatni walitti dhufuu kan qabnu qaata ture, Kanaafis, namoota ardittii keessaa deggersa barbaadan cinaa akka dhaabbannu ibsina'' jedha, warra xalayaa kana irratti mallatteessan keessaa tokko kan ta'e, Raafaa'el Maarkus.
"Amma yeroo murteessinee hojiin agarsiifnurra geenyeerra" jechuunis hima.
Gama mootummaa Ertiraatiin hanga ammaa deebiin kenname hin jiru.
Kuusaa Fakkii Haala simannaa Pirezidantii Ertiraa Isaayyaas Afawarqii suuraan
Artist Lammaa Guyyaa: Fakkii Pirezidaantii Ertiraa kaasan Finfinneetti badhaasanif
Viidiyoo Itiyoo-Ertiraa: Simannaa qeerroo fi qarree Obbo Isaayyaasif